Xela kwiscreen se-Samsung Galaxy S9 entsha kunye ne-S9 + | Iindaba zeGajethi
Kwiveki nje enye ukusungulwa kwayo kwintengiso, ezinye zeemodeli ezintsha zenkampani yaseMzantsi Korea i-Samsung i-Galaxy S9 kunye ne-Galaxy S9 + ziya kuba neengxaki ezinkulu kwiphaneli yokuthinta isikrini. Izikhalazo ezininzi zabasebenzisi ziza kwinethiwekhi kwaye oku akulunganga.
Inkampani ngokwayo ineforum esemthethweni apho kusilela khona ukuxelwa kwaye kwiReddit sikwafumana imisonto eliqela abathetha ngayo ezinye iindawo zesikrini ezingaphenduliyo xa umsebenzisi ecinezela ngentla.
Kukho iividiyo ezininzi, kubandakanya ezinye ze-GIF esele zenziwe ngabo bachaphazelekayo, apho isiphoso siboniswa ngokuthe ngqo. Kwi le vidiyo ungabona ukusilela kwepaneli, njengommandla ofileyo ongaphenduliyo ekuchukumisweni. Akukho datha kwinani labasebenzisi abanokuchaphazeleka kule ngxaki kwaye ke asinakutsho ukuba yingxaki enkulu, kodwa Kubalulekile ukuba abo banengxaki efanayo banxibelelane nenkonzo yezobugcisa esemthethweni Kuba uphawu sele lubonile ingxaki kwaye bathi baphanda izizathu ezinokubakho:
Kwi-Samsung, ukoneliseka kwabathengi kubaluleke kakhulu kwishishini lethu kwaye injongo yethu kukubonelela ngamava amahle. Sifunda inani eliqingqiweyo leengxelo zeGPS S9 / S9 + imiba yokuphendula isikrini. Sisebenza nabathengi abachaphazelekayo kwaye siyaphanda
Abanye abasebenzisi bathi oku kulungisiwe ngokuqalisa kwakhona ngaphakathi Police Police kwaye abanye bathi khange bakwazi ukusombulula ingxaki, ke sijongane nayo ingxaki ukuba ichazwe kwaye ngakumbi ukuba ichaphazela izixhobo ezininzi okanye yinxalenye encinci kuphela. Kungekudala siza kufumana enye yezi Samsung Galaxy S9 ukuphononongwa ngokupheleleyo ukuze senze zonke iimvavanyo eziyimfuneko ukubona ukuba iyasilela na okanye hayi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umnxeba » Iiselfowuni » Xela kwiscreen se-Samsung Galaxy S9 kunye ne-S9 + entsha